लकडाउनमा कहाँकहाँ परिचालित हुनेछन् सेना ? – AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > लकडाउनमा कहाँकहाँ परिचालित हुनेछन् सेना ?
June 2, 2020 June 2, 2020 GRISHI27
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्षा सेना परिचालनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेपछि संशय उत्पन्न भएको छ ।
कोरोना व्याधि नियन्त्रणका लागि सरकारको अरू अङ्ग सक्षम हुँदाहुँदै सुरक्षा सङ्कट नै निम्तिएजसरी सेना परिचालन गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
कतिपयले सबै कुरा सेनालाई जिम्मा लगाएर नागरिक शासनलाई कमजोर तुल्याउन खोजिएको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका बेला सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त जिम्मेवारी नै छुट्टयाएको छ ।
सरकारले सेना परिचालनको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको हो । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले तयार पारेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको कार्ययोजनाअनुसार भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याउने र त्यहाँबाट स्थानीय पालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउने काममा सेना खटिनेछन् ।
सरकारले भारतबाट आउने नागरिकको हकमा सीमा रहेकै विन्दुमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको तयारी गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउनेका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको तयारी गरेको छ । सात प्रदेशको छुट्टाछुट्टै होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने संघीय सरकारका एक एकमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मा दिइने नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने आदेश–२०७७ मा उल्लेख छ ।
कार्ययोजना पनि त्यसैगरी तय भएको छ । कार्ययोजना अनुसार सीमा नाका र काठमाडौंमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई नै छुट्टयाइएको छ । क्वारेन्टिनको सुरक्षा, रेखदेख निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिने सरकारको तयारी छ । क्वारेन्टिन स्थलको सुरक्षामा नेपाली सेनाका अतिरिक्त जनपथ र सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालित हुनेछन् । मुख्य भूमिकामा भने नेपाली सेना नै हुनेछ ।